တစ်ဦးထီပေါက်ပေါ်မှာဆန္ဒရှိ - Coinfalls ကာစီနို
ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များလေးတွေစင်ဒရဲလား၏ပုံပြင်များစကားကိုနားထောငျပွီးလြှငျနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နာမည်ကြီးများမှာ, Rapunzel, Little ကဒုံမြင်းစီး hood ကိုစသည်တို့ကို. And building on the popularity of fairy tales there has been numerous slot games based on them. တထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးထီပေါက်ပေါ်မှာဆန္ဒရှိ. အခြားနတ်သမီးပုံပြင်ပုံစံဂိမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအမှန်တကယ်၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်အတူတကွဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များတစ်အရေအတွက်ပေါင်းစပ်သောကြောင့်, ဒါပေမယ့်ဒီဂိမ်းကအမှန်တကယ်ထူးခြားသည်. ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုသိမှရရန်, အပေါ်ဖတ်.
တစ်ဦးထီပေါက်ပေါ်မှာဆန္ဒရှိ အတူအဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအွန်လိုင်းဗီဒီယို slot ကဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 20 paylines. ဒီ slot ပါကစားရန်သင်သည်သင်၏အလောင်းအစားအားမရသဖြင့်ပယ်စတင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်. သင်က screen ၏အောက်ဆုံးရက်နေ့တွင်စုစုပေါင်းလောင်းကစား tab ကို toggling ဖွငျ့ဤလုပျနိုငျ. သငျသညျဒီဂ​​ိမ်းထဲမှာလှည့်ဖျားနှုန်း 200 £ဦးရေအများဆုံးမှဘယ်နေရာမှာမဆိုလှည့်ဖျားနှုန်း 20p အကြားအလောင်းအစားနိုင်. သင်သည်သင်၏အလောင်းအစားထားပြီပြီးတာနဲ့, သင်သည်လက်ျာလက်ထောင့်အပေါ်လှည့်ဖျား button ကိုဝင်တိုက်နိုင်.
သငျသညျချင်တယ်ဆိုရင်သင်တိုင်းလှည့်ဖျားပြီးနောက်သင်၏အလောင်းအစားကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တူညီသောတယောက်နှင့်အတူဆက်လက်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျတိုင်းလှည့်ဖျားပြီးနောက်လှည့်ဖျားခလုတ်ကိုထိမှမကြိုက်ဘူးလျှင်တစ်ဦးအလိုအလျောက်လှည့်ဖျား option ကိုလည်းရှိပါသည်.
တစ်ဦးထီပေါက်ပေါ်မှာဆန္ဒရှိ အလွန် feature ကိုကြွယ်ဝသောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီဂိမ်းဟာများပြားလှ Mini-ဂိမ်းသို့ခွဲထွက်သည်အသီးအသီးသောနှစ်ယောက်အဓိကဆုကြေးငွေရှိပါတယ်.
ပထမဦးစွာတက်သင်ဆင်းသက်လာသောအခါဖြစ်ပေါ်သော Fairy Tales ဆုကြေးငွေများ3အရက်ကြောင့်မှားယွင်းပေါ်တွင်စာအုပ်ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများ 1,3 နှင့် 5. သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာကြောင်းလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲလိုလျှင်, သငျသညျကစားရန်အောက်ပါ mini ကိုပွဲကစားတစျရှေးခယျြဖို့ option နဲ့အတူအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်
Rapunzel အခမဲ့လှည့်ဖျား – အရက်ကြောင့်မှားယွင်းပေါ်သူတစ်ဦးမင်းသားနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ဖျား 5. သူကအားဖြင့်သင်တို့၏မြှောက်ကိန်းတိုးပွားလာအမင်းသမီးကိုကယ်တင်ဖို့မျှော်စင်တက်ပြီးစောင့်ရှောက်. မင်းသားထိပ်သို့ရောက်ရှိသောအခါအဆိုပါဂိမ်းပြီးဆုံး.
Rumpelstiltskin သဘောတူညီမှုရသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို – ဒီနေရာတွင်သင်တို့အားပေးတော်မူအများအပြားအပေးအယူတဦးကိုရှေးခယျြဖို့ရှိသည်. သင်တို့သည်လည်းကမ်းလှမ်းအပေးအယူငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့တစောင့်ဆိုင်းနိုင်.
သုံး Little ကဝက်အခမဲ့လှည့်ဖျား – ရိုင်းတဲ့ဝက်နှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ဖျား.
ဂျက်နှင့် The Beanstalk – ဒီနေရာတွင်ထို beanstalk ကြီးထွားအောင်ပဲကောက်ဖို့ရှိသည်. သငျသညျထိပ်ရောက်ရှိလျှင်သင်ရွှေရောင်ငန်းဥရှာတှေ့နိုငျ.
ယခု, ဆုကြေးငွေ features တွေကိုအထက်ကလုံလောက်စွာမဖြစ်လျှင်, တစ်ဦးထီပေါက်ပေါ်မှာဆန္ဒရှိ အ Fairy ခေါင်းကိုင်အမေဆုကြေးငွေ၏ပုံစံကိုပူဇော်ဖို့ပိုရှိပါတယ်. ဤသည်ကိုသင်တစုံတယောက်သောသူကိုရှေးခယျြဖို့ option ကိုရရာကျပန်းဖြစ်ပေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်3သငျသညျ့ get တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဆုကြေးငွေထုတ်ဖေါ်ဖို့ orbs.
သင်တစ်ဦးရိုင်းရသို့မဟုတ်သင်္ကေတလုပ်သို့မဟုတ်သင်တို့ပတ်လည်ရိုင်းသို့မဟုတ်ပင်တပြင်လုံးကိုရက်ကြောင့်မှားယွင်းရိုင်းစေဖြစ်ဖြစ်. ဤအပိုဆုကြေးငွေအသီးအသီးကိုတဖန်တစ်ဦးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ပြီးနောက်အမည်ရှိသောသူတို့နှင့်အတူအချို့သော link ကိုရှိသည်.
တစ်ဦးထီပေါက်ပေါ်မှာဆန္ဒရှိ အလွယ်တကူအကောင်းဆုံးဂိမ်းအဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူအစဉ်အဆက်တက်လာကြပြီ. ဒါကြောင့်, အွန်လိုင်းရဒီတစ်ခုပါ. ဒါဟာရကျိုးနပ်မယ့်.
Name ကို: တစ်ဦးထီပေါက်ပေါ်မှာဆန္ဒရှိ
developer : အသေးစိတ်အစီအစဉ်ဂိမ်း
လည် Per လောင်းကစား: £ 0,20 - £ 200,00
ထီပေါက်: 500x က